रणवीरले भावुक हुँदै आँखाबाट आँसु झारेर आलिया भट्टको हात मागे – " कञ्चनजंगा News "
रणवीरले भावुक हुँदै आँखाबाट आँसु झारेर आलिया भट्टको हात मागे
No Comments on रणवीरले भावुक हुँदै आँखाबाट आँसु झारेर आलिया भट्टको हात मागे
यो पनि हेर्नुहोस -७६ वर्षीय एक वृद्धले काम गरेर वार्षिक रूपमा पाँच लाख आम्दानी गर्दै आएका
धन कमाउन बिदेुिशने क्रम बढिरेका बेला रुकुमपूर्वका ७६ वर्षीय एक वृद्धले काम गरेर वार्षिक रूपमा पाँच लाख आम्दानी गर्दै आएका छन् ।
सिस्ने गाउँपालिका–३ पोखराका ७६ वर्षीय मनिराम बुढाले घट्टको पाथर बेचेर वार्षिक रु. पाँच लाखसम्म आम्दानी गर्दै आएका हुन् । उनलाई काम गर्न उमेरले छेकेन । ७६ वर्षको उमेरमा पनि मनिरामसँग जोस र जाँगर निकै छ । बुढेसकालले छोए पनि उनले आफ्नो काम निकै मन लगाएर गर्दै आएका छन् ।
सधैँ बिहानै उठ्ने मनिराम परिवारसँग मिलेर घरको काम सक्छन् र त्यसपछि घन, हथौडा र छिनो बोकेर पाँच मिनेट परको राक्से भन्ने ठाउँमा पुग्छन् । बाह्र वर्षदेखि ढुंगासँगै मितेरी गाँस्दै बिताएको राक्सेमा उनले अहिले पनि पत्थरको घट्ट बनाउँछन । महिनामा दुई घट्ट बनाउँदै आएको र वर्षमा २५ वटासम्म घट्ट तयार पार्ने गरेको र एउटा घट्टलाई बढीमा रु. ४० हजारसम्ममा बिक्री गर्छन् । मनिराम भन्छन्, ‘घट्ट चाहियो भनेर विभिन्न ठाउँबाट माग आउँछ, मागअनुसार बनाउँछु । निर्माण गरेका सबै घट्ट बिक्री हुन्छन् ।’ घट्टको माग रुकुमपूर्व, रुकुमपश्चिम, रोल्पा र बाग्लुङलगायत जिल्लाबाट समेत आउने गरेको उनको भनाइ छ ।
घरमा पनि मनिरामले गाई, बाख्रा, भैँसी, कुखुरा पालेका छन् । घरको काममा उनलाई परिवारले पनि सघाउने गरेको छ । ‘घरधन्दा सकेर बचेको सबै समय घट्ट बनाएरै बिताउँछु । आफ्नै काम र पेसामा रमाउँदा आफूलाई बुढेसकालले छोएको अनुभवसमेत मैले गर्न पाउँदिनँ । घरमै गाईभँैसी पालेको छु । ताजा दूध, दही खान्छु त्यसैले पनि आफूले कमजोर महसुस गर्नुपरेको छैन,’ उनी बताउँछन् । विगत २६ वर्षदेखि घट्ट बनाउँदै आएका मनिराम भन्छन्, ‘म र मेरो परिवारलाई खान–लाउन नपुगेर ढुंगा फोडेको होइन, पुख्र्यौली पेसा हो । पेसाको माया लाग्छ, छोड्न मन लाग्दैन, तर बनाएर राखे पनि कुहिएर खेर जाला भन्ने डर हुँदैन ।’ अहिले पछिल्लो समयमा विद्युतीय मिलको प्रयोग बढदै गए पनि घट्टकोे मागमा कमी नआएको उनी बताउँछन् ।
← सार्वजनिक धारामा पानी भरेको ड्रम छोइएको भनेर कुटपिट गरेको आरोपमा एक जना पक्राउ → ७६ वर्षीय एक वृद्धले काम गरेर वार्षिक रूपमा पाँच लाख आम्दानी गर्दै आएका